unxesi uthi abaqashi kumele baqinisekise ukuphepha kwezisebenzi - Ilanga News
Home Izindaba unxesi uthi abaqashi kumele baqinisekise ukuphepha kwezisebenzi
unxesi uthi abaqashi kumele baqinisekise ukuphepha kwezisebenzi
UNGQONGQOSHE wezeziSebenzi, uMnu Thembelani “Thulas” Nxesi (osesithombeni), uthi ukubuyela kwezisebenzi emsebenzini namhlanje ngeke kufane nokujwayelekile.
Lokhu ukusho izolo ngeSonto esigcawini sabezindaba ngesikhathi ekhuluma ngokuthi ziningi izinto okumele ziqashelwe njengoba kulindeleke ukuba izinkumbi zabantu zibuyele emsebenzini njengoba iNingizimu Afrika seyehlele esigabeni 4 sokuvalwa kwezwe.
UMnu Nxesi uthe kubalulekile ukuba abaqashi baqinisekise ukuphepha kwezisebenzi ezibuyela emsebenzini njengoba phambilini bekumenyezelwe ukuthi kumele kuqale kuqinisekiswe ukuthi izindawo ezizosebenzela kuzona ziphephile nokuthi zihlolelwe ukuthi kazinayo yini iCovid-19 ngaphambi kokubuyela emisebenzini.
“Kubalulekile nakuzona izisebenzi ukuba zisheshe ziziveze uma zisola ukuthi zinezimpawu zalesi sifo. Uma zihluleka wukwenza lokho, zizobe zephula imithetho yezokusebenza nokuphepha emsebenzini.
“Labo abatholakala benezimpawu, kumele bahlaliswe ngabodwa, bese kubizwa abezempilo babahlole bese belandelela okufanele,” kusho yena.
Ugcizelele ukuthi kubalulekile futhi ukuthi kubenezinto ezivikela izisebenzi okubalwa ama-sanitiser nezifonyo (mask).
Uthe umqashi kumele aqinisekise ukuthi isisebenzi ngasinye, okungenani sinezifonyo zendwangu ezimbili.
Uphinde waveza ukuthi izindawo zokusebenzela zizophinde zihanjelwe ngabezempilo abazobe bebheka ukuthi imiya-lelo yezokuphepha iyalandele-lwa yini.
Previous articleImeya “ivinjwe” ukungena epulazini
Next articleUsekwi-Vuma fm uDkt Khehlelezi